Cervical Cancer (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Cervical Cancer (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cervical Cancer (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ)
တခြားကင်ဆာတွေနည်းတူ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာလည်း (သားအိမ်ခေါင်းဆိုတာသားအိမ်ရဲ့ အောက်ဖက်အဝတစ်လျှောက်ကိုဆိုလိုပါတယ်) ဆဲလ်တွေထိန်းမနိုင်သိမ်းမရပွားတာကနေ အစပြုပါတယ်။ ဆဲလ်တွေ ဒီလို အလွန်အကျွံပွားတာကြောင့် အလုံးအကျိတ်ဖြစ်လာပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရယ်လို့ ဖြစ်လာရပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pap test လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးစစ်တာကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ မှန်မှန်ပြုလုပ်စစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုရင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို စောစီးစွာ ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စောစီးစွာ သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ချေ ပိုများလာမှာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျှော့ချထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းဟာ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဟာ အရမ်းအဖြစ်များပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ကာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ကင်ဆာမဖြစ်ခင်အခြေအနေနဲ့ကင်ဆာဖြစ်ခါစ ကနဦးအနေအထားမှာ ဘာလက္ခဏာမှ ပြလေ့မရှိပါဘူး။ ကင်ဆာအတော်အမြစ်တွယ်နေမှ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြတာပါ။ အဲ့အချိန်ကျရင် ဘေးနားတဝိုက်က အင်္ဂါတွေကိုဖိထားနေပြီဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေကိုပါ ဖျက်ဆီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
• မိန်းမကိုယ်ကနေ မူမမှန် သွေးဆင်းခြင်း (ဥပမာဓမ္မတာချိန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းတာ၊ ဓမ္မတာတစ်ခါလာရင်ကြာတာ၊ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံပြီးရင် သွေးဆင်းတာ၊ အိမ်သာတက်ပြီးရင် သွေးဆင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်က အောက်ပိုင်းစမ်းသပ်ပြီးရင် သွေးဆင်းတာစသဖြင့်)။
• ဗိုက်အောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဆီးစပ်နာခြင်း/အောင့်ခြင်း။
• လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်ခြင်း
• မိန်းမကိုယ်က ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရည်တွေဆင်းခြင်း (ဥပမာ သွေးစတွေပါတာမျိုး)။
တခြားသော ရောဂါအခြေအနေတွေ (ဥပမာပိုးဝင်တာမျိုး) ကြောင့်လည်း အထက်ပါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှင်းသွားရအောင် အထက်ပါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရပြီဆိုတာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့သွားရောက်ပြသစစ်ဆေးမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဖူးလေဆိုပြီး ပေါ့လျော့တာမျိုးကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုးလာစေပြီး အပ်နဲ့ထွင်းရမယ့် နေရာကိုပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ရတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးကတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်တဲ့အထိ စောင့်မနေဘဲ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးစစ်တာနဲ့ အောက်ပိုင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခံယူတာကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလတွေမှာ ပုံမှန်ပြုလုပ်ရမှာပါ။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်သလဲ။
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါခံစားရသူ အားလုံးနီးပါးဟာ human papillomavirus(HPV) လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားရလေ့ရှိပြီး ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အများအားဖြင့် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်လေ့ရှိတာပါ။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအမျိုးအစားပေါင်း တစ်ရာကျော်ရှိပေမယ့်အများစုဟာ အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။
တကယ်တမ်းပြောရရင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအများစုမှာ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတတ်တာ များပါတယ်။ တချို့ HPV ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ဘာရောဂါလက္ခဏာမှမဖြစ်စေဘဲ တချို့တွေကတော့လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ဖြစ်စေကာတချို့HPV ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်စေပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ HPV ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ၁၆ နဲ့၁၈ တို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားရတာပါ။ ဒီ HPV ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတွေဟာ ရောဂါလက္ခဏာ စောစောစီးစီး ပြလေ့မရှိတာမို့အမျိုးသမီးအများစုအနေနဲ့သူတို့မှာ ပိုးကူးစက်ခံနေရမှန်း သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးယူပြီး စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီစစ်ဆေးမှုဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် အလွန်ပဲအရေးကြီးလှပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးယူတာဟာ သားအိမ်ခေါင်းဆဲလ်တွေကင်ဆာအဆင့်မရောက်ခင် ပြောင်းလဲနေတာတွေကို သိရှိထုတ်ဖော်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆဲလ်တွေ ပြောင်းလဲနေတာကို စောစောစီးစီးကိုင်တွယ်ကုသနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို အောင်မြင်စွာကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေသလဲ။
လူအများစုမှာ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေတတ်တာမို့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေတဲ့ အချက်တွေက သက်သက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်တွေထဲကတချို့ကတော့-
• HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်း။ လိင်ဆက်ဆံဖော်များခြင်းဟာ HPV အမျိုးအစား၁၆နဲ့၁၈ကူးစက်ခံရနိုင်ချေကို များပြားစေပါတယ်။
• ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ ဆေးလိပ်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးမှာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါဝင်နေတဲ့အတွက် ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆေးလိပ်မသောက်သူတွေထက် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေ နှစ်ဆပိုများတယ်လို့သိရပါတယ်။
• ခုခံအားကျဆင်းခြင်း။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုကျဆင်းပျက်စီးစေတဲ့အခြေအနေတွေ (ဥပမာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတာဟာ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်ချေကိုပါ မြင့်မားစေတဲ့အတွက် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ဦးတည်နေပါတယ်)။
• ကလက်မိုင်းဒီးယားပိုး(Chlamydia) ကူးစက်ခံရခြင်း။ ကလက်မိုင်းဒီးယားပိုးကူးစက်ခံရဖူးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိကူးစက်ခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေပိုများတယ်လို့ လေ့လာချက်တချို့အရသိရှိရပါတယ်။
• ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံအစားနည်းခြင်း။ အသီးအရွက်တွေ၊ သစ်သီးတွေလုံလောက်အောင် မစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
• အဝလွန်ခြင်း ။ အဝလွန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရဲ့ ပစ်မှတ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
• ပဋိသန္ဓေတားဆေးတွေကိုကာလကြာရှည်စွဲသုံးစွဲခြင်း။ ဒီဆေးတွေကို ကြာရှည်စွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ ရှိနေပါတယ်။
• သားအိမ်တွင်းထည့် ပဋိသန္ဓေတားပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း။ intrauterine device (IUD) လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့်ပဋိသန္ဓေတားပစ္စည်းကြောင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေ အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
• ကလေးခဏခဏ မွေးခြင်း။ ကလေးသုံးယောက်နဲ့အထက် မွေးဖူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
• ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အသက် ၁ ၇နှစ်မပြည့်သေးခြင်း။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ နှစ်ဆပိုများတယ်လို့သိရပါတယ်။
• ဆင်းရဲမွဲတေမှု။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် တချို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးယူပြီး စစ်ဆေးတာအပါအဝင် တခြားသောကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ရယူခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
• Diethylstilbestrol (DES)။ DES ဟာ ဟော်မုန်းဆေးတမျိုး ဖြစ်ပြီး တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာကို ကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဒီဆေးအသုံးပြုတဲ့ မိခင်တွေဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ပိုမိုမြင့်မားပြီး သူတို့ကနေ မွေးဖွားလာတဲ့သမီးမိန်းကလေးတွေမှာပါ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ပိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် အန္တရာယ်များလှပါတယ်။
• သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ မျိုးရိုးရှိခြင်း။ သင့်အမေ ဒါမှမဟုတ် အမမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုရင် သင့်မှာလည်း ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ နှစ်ဆကနေ သုံးဆအထိ ပိုလာနိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များနေရာတွင်အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာ အတည်ပြုသလဲ။
ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ Pap test လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ခေါင်းချွဲမြှေးယူစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို အဖြေရှာအတည်ပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးလို့ မူမမှန်တဲ့ဆဲလ်အပြောင်းအလဲတွေကို တွေ့နေရတယ်ဆိုရင် ကင်ဆာရဲ့ ရှေ့ပြေး ဒါမှမဟုတ် ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့အတွက် အသားစယူစစ်ဆေးတာမျိုးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
စစ်ဆေးမှုတွေမှာ ပုံမမှန်တာတွေကို တွေ့ရှိရရင်၊ သားအိမ်ခေါင်းဆဲလ်တွေ မူမမှန်ပွားများကြီးထွားနေတာကို တွေ့ရရင် ဒါမှမဟုတ် သင့်မှာ မူမမှန် သွေးဆင်းတာမျိုးရှိနေရင် သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကိုမီးယပ်နဲ့သားဖွားဆရာဝန်(အိုဂျီ)ဆီ လွှဲပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိပြုသင့်တာက မိန်းမကိုယ်က သွေးဆင်းတိုင်း ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမကိုယ်က မူမမှန်သွေးဆင်းရခြင်းရဲ့ အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းဟာ ကလက်မိုင်းဒီးယားပိုး ကူးစက်ခံရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုအိုဂျီဆီမလွှဲခင် ကလက်မိုင်းဒီးယားပိုးရှိမရှိ အရင်စစ်ဆေးဖို့သင့်ဆရာဝန်က အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
• Colposcopy လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ခေါင်းအတွင်းထဲကို မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း
• အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း။ ထုံဆေးပေးပြီး ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်း အသားစ အနည်းငယ်ကို ကတော့ချွန်ပုံစံ ဖြတ်ယူပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အသားစယူပြီး ရက်သတ္တပတ် လေးပတ်လောက်ထိ သင့်အနေနဲ့ သွေးဆင်းနေမှာ ဖြစ်ပြီး ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်မှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှိနေတာ သေချာပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်အဆင့်ထိ ရောက်နေပြီလဲဆိုတာ ဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ကာ ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကတော့-
• သင့်ရဲ့သားအိမ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ အူမကြီးနဲ့ဆီးအိမ်တို့မှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေပျံ့နှံ့နေတာ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး ထုံဆေးအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
• ဘေးနား တစ်ဝိုက်က အရိုး၊ သွေးနဲ့ ကျောက်ကပ်တို့ရဲ့အခြေအနေကို ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (CT)၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန် (MRI)၊ X-ray ဓါတ်မှန်နဲ့ Positive emission tomography (PET) scan ရိုက်တာတွေကို ပုံရိပ်ဖမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကင်ဆာကျိတ်တွေရဲ့ တည်နေရာနဲ့အရွယ်အစားကိုသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် တခြားနေရာတွေကို ပျံ့နှံ့နေခြင်းရှိမရှိကိုပါ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ကုသရတာ ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်ကိုကျွမ်းကျင်စွာ ကုသပေးနိုင်သူတွေရာ၊ နှောင်းပိုင်းအဆင့်မှာ ကုသပေးနိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပါ ဆေးရုံအနေနဲ့အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
ဒီကင်ဆာဟာ စောစောကုလေ ကောင်းလေဖြစ်ပေမယ့် အများအားဖြင့် ရောဂါဖြစ်နေကြောင်းကို စောစီးစွာ သိလေ့မရှိကြပါဖူး။
ယေဘုယျအနေနဲ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်း သုံးသွယ်ရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသတာ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံးပြီး ကုသတာနဲ့ ဆေးသွင်းကုသတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆဲလ်တွေပွားများနေတဲ့ နေရာတွေကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုရရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်ရော လူနာရောအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• သားအိမ်ခေါင်းနဲ့အနားတစ်ဝိုက်ကတစ်ရှူးတွေရယ်၊ မိန်းမကိုယ်ရဲ့အပေါ်ဖက်ပိုင်းရယ်ကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး သားအိမ်ကိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထားခဲ့တဲ့နည်းလမ်း။
• သားအိမ်နဲ့သားအိမ်ခေါင်းအားလုံးကို ထုတ်ပစ်တဲ့နည်းလမ်း။ ကင်ဆာအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး မမျိုးဥအိမ်နဲ့သားဥပြွန်တွေကိုပါ ဖယ်ရှားကောင်းဖယ်ရှားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ကလေးထပ်ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
• သားအိမ်ခေါင်း၊ မိန်းမကိုယ်၊ သားအိမ်၊ ဆီးအိမ်၊ မမျိုးဥအိမ်၊ သားဥပြွန်နဲ့အူမကြီးစတဲ့ အင်္ဂါတွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုအကြီးစားဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်ခါစ အခြေအနေမှာ ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံးပြီး ကုသနိုင်သလို ခွဲစိတ်မှုနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာအဆင့်မြင့်လာရင်တော့ သွေးယိုစီးတာနဲ့နာကျင်တာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံးကုသတာကို ဆေးသွင်းကုသတာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကုသမှုဟာ သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ ဓါတ်ရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့စေပြီးကုသတာဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို ခန္ဓါကိုယ်အပြင်ဖက်ကနေ စက်နဲ့ပစ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းထဲကို ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထည့်ပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေ ဖြာထွက်စေတာမျိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးရောနှောပြီး ကုသတာမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကုသတဲ့ ကာလဟာ ရက်သတ္တပတ် ငါးပတ်ကနေ ရှစ်ပတ်လောက်ထိ ကြာမြင့်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီကုသမှုနည်းလမ်းကို တမျိုးတည်း ပြုလုပ်နိုင်သလို ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးတာနဲ့လည်း တွဲဖက်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်သွားတဲ့ ကင်ဆာတွေမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ထပ်ပွားမလာတော့အောင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆရာဝန်ချိန်းတဲ့ရက်တွေမှာ သွားရောက်ပြီး အကြောဆေးသွင်းယူ ကုသမှုခံယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဆေးသွင်းကုသတာဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တာကြောင့် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဦးစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စောစီးစွာ သွေးဆုံးသွားတာ၊ ယောနိကျဉ်းသွားတာ ဒါမှမဟုတ် အကျိတ်တွေ ရောင်လာတာစတဲ့ ဘေးထွက်ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Cervical cancer. http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/. Accessed July 24,2016.
Cervical cancer. http://www.webmd.com/cancer/cervical-cancer/cervical- cancer-topic-overview. Accessed July 24, 2016.
Cervical cancer. http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of- the-cervix/Pages/Intro-duction.aspx. Accessed July 24, 2016.